gabdahha dhuudhuuban sidaan ayaa galmo istaag loola sameyn karaa | Gaaloos.com
Home » galmada » gabdahha dhuudhuuban sidaan ayaa galmo istaag loola sameyn karaa
gabdahha dhuudhuuban sidaan ayaa galmo istaag loola sameyn karaa
Jidhka dhis: Ma doonaysa inaad kalsooni naftaada u yeelatid? Sida kaliyah ee kalsooni lagu yeelan karo oo raga badankoodu ka fikiraan ayaa waxay tahay inaad tababar samaysid oo murqo quruxbadan yeelatid.
Haddi aad tawabaratid oo aad dhistid jidhka waxaad dareemaysa kalsooni dheeri ah iyo in dadka badankoodu adiga kusoo eegayaan oo aad dareentid inaad quruxbadan tahay, isla dareenkaas ayaa ah kan kugu hogaaminaya inad qof hawenay ah la hadashid, waana muhiim in dareenkaas ama kalsoonidaasi kugu jirto inta aanad qof la hadlin. Waa inaad ogaata inaad nin tahay oo dumarka adiga ku doonayaan.
Sideedaba dumarku ma jecla qofka caajiska ah ama dadka daciifka ah, marka waxan ku odhan laha ka kac meesha oo tawabar samee oo jidhkaaga dhis.
Noqo nin raganimo leh (Alpha male): Sideedaba waxaynu ognahay in habluhu ka helaan raga ay raganimadu ku jirto kana muuqato. Weyna ku beeran tahay dumarka taasi, sida inaga oo rag ah ay inoogu beeran tahay in hadii hawenay ina hor marayso melaha aynu ka eegno ay noqdaan naasaha, futada ama dhinacyada (bistooladaha). Dabeecadaas iskama badali karno, amar ilaahay, dumarkuna iyaguna iskama badali karaan dabeecadaas oo indhaha kama jeedin karaan markay arkayan wiil murqo dhisan leh.
Bilow: Bilow macnahedu waxa weye inaad markasta adigu horaysid. Adigu markasta wa inad noqota qofka wax kasta oo dhacaya u horeeya. Adigu waa inaad toos ugu tagta gabadha oo aad bilawda inaad la haasawdid oo aad la hadashd, halkii aad ka sugi lahayd inay iyadu marka hore kuu timaado oo ay hadalka kaaga horayso.
Noqo adigu ka markasta dhunkashada ugu horaysa sameeya adigoon gabadha waydiinin, wa inaad noqota qofka u hogaamiya gabdha xaga qolka iyo haday noqon lahayd xaga galmadaba.
Haddii aad koox dad ah ku socotaan, ha ka mid noqon kuwa xaga danbe socda ee ka mid noqo kuwa xaga ugu horaysa socda.
Waxa jira rag badan oo leh kalsooni balse aan aqoonin sida wax loo bilaabo. Waana shayga kaliyah ee ku caawin kara, waana inaad ogaata inad adigu markasta wax bilaabi kartid inta dadka kale aysan wax samaynin.
Tusaalooyin soo jiidasho leh
1.Dhoolacadayn – Mar kasta wa inad xasuusata inaad dhoola cadaysid, markad la hadlaysid gabadha, markad dhagaysanaysid iyo marka aad wax kasta samaynaysid inta aad gabdha la joogto.
Dhoolacadyntu waa habka kaliyah ee wax ku oolka ah ee ay isticmaalan raga dumarka badan shukaansada. Dhoolacadayntu waxay gabadha ku abuuraysa kalsooni iyo in xidhiidh wanagsani idinka dhaxeeyo inta aad wada joogtan, iyo inay kuu malayso inad tahay wiil qosol badan oo waxa dhici karta inay sii jeclaysato dhoolacadayntaadaas.
2. Ku celceli magaceeda – Marka aad gabadha la kulantid ku celceli magaceeda sidii in magaceedu musik u yahay dhagahaaga. Tusaale ahaa dheh; Fadlan igada ciyaarta, Haniyey, wan ogahay inad ila kaftamayso.
Halkii aad ka odhan lahayd; Fadlan igada ciyaarta,…. wan ogahay inad ila kaftamayso. Sidaasna waxay sii xoojinaysa xidhiidhkiina iyo dabcan is aaminadiina.
3. Markasta amaan gabadha – waayo haddi aad markasta erey fiican aad ku tidhaahdid gabadha, iyaduna way sii jeclaanaysa inay kula sii joogto ama kula sii hadasho, laakin markad ku odhanaysid erey quruxbadan, ha ugu odhan sidii inaad la kaftamaysid ama yeey kuu maleynin inaad iyada is leedahay hakaa hesho (inkasto aad is leedahay hakaa hesho, balse anad doonayn inay iyadu ogaato).
4. Weydinta numberkeeda – Hadii aad doonaysid inaad gabadha aad la hadlaysid weydiisid talefankeda, ku dheh ( waxad iila egatahy qof aad u wanaagsan, ma leedahay talefean aan kaa soo wici karo ), halkii aad ka odhan lahayd (talefankaga isii). Ama iyada mobilkaaga u dhiib oo usheeg ( maaha waydiin, usheeg iyada) in ay numberkeeda ku qorto mobilkaaga.
Anigu waxan doorbidi laha tijabada hore, halka tan labaadi ay tahay si xirfadaysan oo lagu heli karo gabadha mobil numberkeda.
5.Hadii gabadhi ku diido inay kula hadasho ama isukaa xayeysiso – u dhoola cadee oo isaga tag meesha, ma kol baad u dhimanaysa, ma kol baad mar danbe la hadli doonta, waa maya.
Iyada waa u nasiib darro in wiil wanaagsan oo sidaado kale ah ay iska indha tirtay.
6. Hadii ay gabadhi intay kusoo wacdo ku waydiiso maxad qabanaysa? Waligaa ha ugu jawaabin waxba! Maxa yeelay hadii aad ugu jawabtid waxba oo mar kasta ay kusoo wacdo aad tahay qof diyaar iska ah oo lala hadli karo lana heli karo xili kasta, taas waxa dhici karta in ay dareento gabadhu in aanad ahayn wiil ama nin aan nolol lahayn oo waxba aan qabsan.
Hadii ay kusoo wacdo ku dheh mashquul ayaan ahay ee hadhaw ayan kuso wacaya xitaa adigoon mashquul ahayn.
Waayo taasi waxay dhisaysaa xiisaha ay kuu qabto o waxa laga yaaba inay haddana mar labaad kusoow acdo adigoon sioo wicinba
Title: gabdahha dhuudhuuban sidaan ayaa galmo istaag loola sameyn karaa